Facebook – AsiaApps
Facebook ရဲ့ နောက်ဆုံး Bug ကြောင့် ကိုယ့် Account က ဓာတ်ပုံတွေ leaked ဖြစ်တဲ့အထဲ ပါမပါစစ်ကြမယ်!
December 18, 2018 minn2unApp NewsNo Comment on Facebook ရဲ့ နောက်ဆုံး Bug ကြောင့် ကိုယ့် Account က ဓာတ်ပုံတွေ leaked ဖြစ်တဲ့အထဲ ပါမပါစစ်ကြမယ်!
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က Facebook ရဲ့ ဓာတ်ပုံ API (Application Programming Interface) error ကြောင့် ဓာတ်ပုံတွေဟာ User Access မပေးဘဲ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တယ်လို့ Facebook က ပြောလိုက်ပါတယ်။ Facebook…
Region အချို့မှာအသက်ဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Facebook ရဲ့ “Unsend message option”
November 15, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Region အချို့မှာအသက်ဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Facebook ရဲ့ “Unsend message option”
Messenger မှာပို့ပြီးသား စာတွေကို ပြန်ဖျက်နိုင်မယ့် Unsend feature ကို Facebook ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လောက်ကတည်းက ကြေညာခဲ့တာဖြစ်သလို Version update တွေမှာလည်း Coming soon ဆိုပြီး release note တွေတောက်လျှောက်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့…
မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Facebook ရဲ့ unsend feature
November 12, 2018 November 14, 2018 MoonApp NewsNo Comment on မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Facebook ရဲ့ unsend feature
သူငယ်ချင်းတို့ရေ Facebook messenger မှာ စာတွေ ဖျက်လို့ရတော့မယ်နော်။ ဒီအကြောင်းကို အရင်ကလည်း ပြောဖူးတဲ့ အတွက် သိနှင့်ပြီးကြမှာပါ။ Messenger unsend feature နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာလေးတစ်ခုကို ဒီတစ်ခေါက်ထပ်ပြီး ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာက…
Portal ဆိုတဲ့ Hardware device တစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook!
October 10, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Portal ဆိုတဲ့ Hardware device တစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Facebook!
Facebook ဟာတော့ Communication hardware device ဖြစ်တဲ့ Portal ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းအငယ်ကပဲမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Portal ကတော့ AI စမတ်ကင်မရာ၊ Smart Sound Technology အစရှိတဲ့ နည်းပညာတွေပါဝင်ပြီး Video calling အတွက်…
Facebook account တစ်ခု delete လုပ်ရာမှာမိမိ data တွေအားလုံးပျက်သွားဖို့အချိန်တစ်လတိတိစောင့်ဆိုင်းရတော့မည်
October 5, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Facebook account တစ်ခု delete လုပ်ရာမှာမိမိ data တွေအားလုံးပျက်သွားဖို့အချိန်တစ်လတိတိစောင့်ဆိုင်းရတော့မည်
ပုံမှန်ဆို Facebook (FB) အသုံးပြုသူ User တွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့ Facebook account ကို delete လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေအာလုံးပျက်ပြီး account ကြီးထာဝရပျောက်ကွယ်သွားဖို့ စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ကာလ (Account deletion grace…
မြန်မာ့တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Account, Page တော်တော်များများ Facebook မှဖြုတ်ချခံရ
August 28, 2018 August 29, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on မြန်မာ့တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Account, Page တော်တော်များများ Facebook မှဖြုတ်ချခံရ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဉီးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ Page အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများရဲ့ Account, Page တွေကို အသုံးပြုခွင့်ပေးတော့မှာမဟုတ်ပဲ ဖြုတ်ချလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့နာရီအနည်းငယ်တုန်းက Facebook ဟာ တရားဝင်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ထဲမှာ Facebook account စုစုပေါင်း ၁၈ ခု၊ Instagram…
Facebook update ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Feature အသစ်များ
August 9, 2018 WilliamApp News / FeaturesNo Comment on Facebook update ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Feature အသစ်များ
မနေ့တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Facebook update အသစ် (Version 184.0) ကိုတော်တော်များများသတိထားမိလောက်ကြမှာပါ။ Update အသစ်မှာဆိုရင် မသိမသာလေးနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ UI (User Interface) ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲထားတာဖြစ်သလို၊ အသုံးဝင်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Feature အသစ်လေးတွေကိုထည့်သွင်းပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့…
2018 FIFA World Cup ကိုယ်စားပြု ဂိမ်း/Stickers/Effects အစရှိတာတွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့ Messenger update
June 12, 2018 June 12, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on 2018 FIFA World Cup ကိုယ်စားပြု ဂိမ်း/Stickers/Effects အစရှိတာတွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့ Messenger update
Messenger ရဲ့နောက်ပိုင်းထွက်ရှိမယ့် update အသစ်မှာ 2018 FIFA World Cup ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဂိမ်း/ Stickers/ Effects အစရှိတာတွေပါဝင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ Facebook ကကြေညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Update ဟာ Google Play Store နဲ့…